> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray ka HTC Mid ka mid ah
Sanadkii la soo dhaafay, HTC dhigay saddex casriga fiican: Mid ka mid ah HTC ee S, ee HTC Mid ka mid ah V iyo X. HTC oo dhan oo iyaga ka mid ah ayaa ka dhigay guulihii weyn. Sannadkan, HTC ayaa sii daayay ay flagship casriga cusub: Mid ka mid ah HTC ayaa, tufaaxa weyn ee indhaha taageerayaasha HTC '. Tan iyo markii ay sii daayo, taas oo ka mid cusub HTC ayaa doorbiday by farabadan oo dad ah ay sabab u dhuuban, macdan iyo design duwanyihiin. Sidoo kale, waxa uu si joogta ah u la la barbar dhigo iPhone kulul 5 iyo Samsung Galaxy S4 . Waa hagaag, waxaan ku leeyahay, kulligood way wada leeyihiin dhibcood weyn, iyo qof kasta oo iyaga ka mid ah waxay noqon kartaa mid fiican doorasho. Haddii yous waa HTC Mid ka mid ah ay fursad, buugan faa'iido kuu yeelan doontaa in.
Tilmaan-bixiyahan waxa inta badan ka hadalka sida inuu ka soo kabsado xiriirada tirtiray ka HTC Mid ka mid ah. Dabcan, waxa ay sidoo kale la heli karo in ka mid ah HTC ee S, HTC Mid ka mid ah V iyo HTC Mid ka mid X. badan Android users waxaa loo isticmaalaa in syncing taleefannadooda la Google account, kaas oo kaa caawin kara in ay gurmad xiriirada ay online. Sidaa darteed, sida ugu wanaagsan ee ay u soo ceshano xiriirada lumay ee HTC Mid ka mid ah waa in ay iyaga soo celin xisaabtaada Google, ilaa iyo inta aad weligaa waxan sameeyey.
Waa maxay, haddii aadan synced aad la xiriirayso account Google? Waxaad weli uma baahna in ay ka walwalaan wax ku saabsan. Iyadoo Android qalab kabashada xogta saxda ah, waxa kale oo aad ka heli kartaa badiyay HTC Mid ka mid ah xiriirada, laakiin waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa: joojiso isticmaalka telefoonka ka hor inta aanad dib u helaan xiriirrada lumay ee aad HTC Mid ka mid ah.
Qabtaan HTC Mid ka mid ah soo kabashada xiriirada in tallaabooyinka
Hel ah software HTC Mid ka mid ah laga badiyay kabashada xiriirada xiriir: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery)
Sida Android software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee, Wondershare Dr.Fone for Android awood aad si toos ah baarista telefoonada Android inay ka soo kabsadaan lumay xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, audio iyo waraaqaha. Waxaa diyaar u ah in badan oo kiniin ah Android iyo telefoonada. Ka hor inta soo kabashada, waxaad ku eegaan karo xogta recoverable si ay u go'aamiyaan mid aad rabto. Raac tallaabooyinka hoose si aad u buuxa waxaa isku dayi keligaa.
First of dhan, hubi in aad HTC Mid ka mid ah waa in hab debugging USB. Waxaad ku hubin kartaa in hab fudud, u tag Settings , dooran fursadaha Developer , ka dibna hubi khadka leh debugging USB . OK, telefoonka hadda waa in hab debugging USB.
Next, abuurtaan Wondershare Dr.Fone for Android on your computer iyo in ay xirmaan qalab aad la cable USB. Marka aad telefoon la aqoonsan yahay, waxaad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Ku bilow aad ka baareyso HTC Mid ka mid ah in la helo xiriir tirtiray ku yaal
Hadda, waxa aad bilaabi kartaa baar telefoonka adigoo gujinaya button Start ku saabsan suuqa kala barnaamijka (Marka aad bilowdo, loo xaqiijiyo in aad HTC Mid ka mid ah ayaa batari waa ugu yaraan 20% ku amray). Markii barnaamijka bilaabo aad ka baareyso phone, ma barkinta telefoonka sinaba. Waqtiga iskaanka ku xiran yahay qadarka xogta ku kaydsan qalab aad. Just sugaan in mudo ah.
Fiiro gaar ah: Marka dhan xiriirada recoverable iyo farriimaha waa la helay, barnaamijka idin xusuusin doonaa waxa ku saabsan. Markaas waad joojin kartaa habka scan iyo bilaabaan in ay dib u helaan xiriirada aad.
Tallaabada 3. Check oo soo kabsado xiriirada lumay ee aad HTC Mid ka mid ah
Barnaamijku wuxuu ku siin doonaa natiijo baaritaan scan ka dib. Dooro Xiriir dhanka bidix, oo waxaad iyaga ku eegaan kartaa mid ka dhan mid ka mid. Dooro waxa aad rabto iyo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer. The xiriirada kabsaday badbaadi kara sida .html, .csv iyo files .vcf on your computer ugu kala duwan.
Fiiro gaar ah: Xiriirada natiijada scan ma aha dhallaankoodii oo dhan tirtiray (in orange). Sidoo kale waxaa jira xiriir ka jira (madow) oo aad HTC Mid ka mid ah. Eegista Waxaad soo kaban karto, wax kasta oo aad rabto.